Xubnihii Laga Soo Cawday Ee Guddiyada Doorashooyinka Ee Soomaaliya Oo Liiska Laga Saaray – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Xubnihii Laga Soo Cawday Ee Guddiyada Doorashooyinka Ee Soomaaliya Oo Liiska Laga Saaray
Allhadaaftimo June 6, 2021 June 6, 2021 Uncategorized
Guddigii uu ra’iisul wasaaraha Soomaaliya u saaray xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo mid dawlad goboleedba ayaa saacado ka hor shaaciyay in 34 xubnood laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka.
Guddiga waxa uu intaas ku daray in go’aankaasi ay gaareen kaddib markii ay wadatashi ballaaran sameeyeen ayna dhinacwalba ka eegeen xubnaha eedda loo soo jeediyay.
Haddaba go’aanka guddiga waxaa shir jaraa’id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho ku shaaciyay wasiir ku xigeenka warfaahinta ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala: “Maalmo dedaal dheer aan bixinay wadatashi balaaran aan sameynay isticmaalnay dhamaan aalladihii aan heli karnay suurtagalka nooga dhigi lahaa in aan kala oggaano cabashooyinkii la xiriiray guddiyada saddexda qaybood ah ee hirgalinta doorashada guddiga heer federal ee Fiit guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga heer mamaul goballeed ee Siit waxaa caawa noo suurta gashay in aan soo gabagabeyno kala saaristii iyo kala hubintii” ayuu yiri wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenka warfaafinta ayaa dhanka kale waxa uu faafaahin dheeraad ah ka bixiyay waxa ay kala yihiin 34 xubnood ee ay ka saareen guddiyada doorashooyinka: “Waxaa jira sidoo kale saddex xubnood oo heer maamul goballeed ee Soomaaliland oo iyagana ay tabashooyin ka jiraan waxaana innagoo raacayna heshiiskii 27 May magaalada Muqdisho lagu saxiixay aan u gudbinay raysal wasaaraha ku xigeenkiisa iyo guddoomiyaha Aqalka Sare in ay tashi ka yeeshaan arrintaas sidii ay u xalin lahaayen”
Guddigaas xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ee xaqiijinayay eedaha loo soo jeediyay qaar ka mid ah guddiyada doorashooyinka ee Soomaaliya ayaa markii uu natiijadiisa ku dhawaaqay kaddib waxa uu dhinacyadii soo magacaabay xubnaha ay ka saareen guddiyada ka codsadeen in muddo 48 saacadood gudahood ah ku soo magacaabaan xubnihii badalilahaa 34 taas qof ee uu guddigu soo gudbiyay.
Dowladda waxay sheegtay in baaritaano ay ku sameyneyso eedeymaha loo jeediyay guddiga balse haddii ay soo baxaana caddeymaha in meesha laga saari doono xubnaha lagu helo caddeymaha.
“Shaqada aan hadda bilaabeyno ayaa ah in aan baaritaan ku sameyno eedeymahaas , caddeymo aan u raadinno kadibna ciddii caddeymo ku filan loo helo isla markaana buuxin weyso shuruudaha ku xusan 17-ka September heshiiskii la gaaray iyo awaamiirta uu Ra’iisul Wasaaraha na siiyay in cid kamid ah shaqaalaha rayidka ama ciidamada aanay kamid noqon ciddii ku habboonaan wayso habraacaas ayaan ka saari doonaa” ayuu yiri Al Caddaala.
“Waxaan kulamo toos ah iyo xiriiro iyo wadatashi la sameynay dhammaan dhinacyada ay arrintan khuseyso haddii ay ahaan laheyd musharraxiinta, guddoonka Aqalka Sare, Golaha Shacabka, dowlad goboleedyada , ilaa hadda si mideysan oo la dhan yahay ayaan ku wadnaa, natiijo lagu qanco oo ku saleysan wixii lagu heshiiyay ayaana rajeyneynaa in aan soo saarno” ayuu yiri wasiirka.
Diiwaanka Xubnaha Cabashada Ka jirto
Xafiiska Ra’isulwasaaraha waxa uu warbaahinta la wadaagay diiwaanka magacyada dadka cabashada laga qabo, waxaana ka wada muuqda dhammaan heerarka kala duwan ee uu guddiga ka koobanyahay, sida kan heer federaalka, dhammaan dowlad goboleedyada iyo kan xalinta khilaafaadka.
Waxaase xusid mudan in xubin ka mid ah dadka ku qoran diiwaanka xafiiska Ra’isulwasaaraha uu soo gudbiyay uu geeriyooday bishii April ee sanadkan. Cabdicasiis Sheekh Dhayib ayaa ka mid ahaa xubnihii ay soo gudbisay dowlad goboleedka Jubbaland.
Musharixiinta iyo dowlad goboleedyada qaar oo kaliya ma ahan kuwa cabashada ka qabay guddiga, balse waxa ay u egtahay in xitaa dowladda federaalka ay cabasho ka qabtay qaar ka mid ah xubnaha kasoo gudbay maamul goboleedyada qaar.
Dhanka kale Isniintii hore ayey aheyd markii Golaha Midowga Musharraxiinta mucaaradka ee Soomaaliya ay magaalada Muqdisho ku shaaciyeen liiska 67 xubnood oo ka tirsan guddiyada kala gadisan ee doorashooyinka ee heer federaal iyo heer maamul goboleedba, kuwaas oo ay sheegeen inay si qotto dheer u turxaan bixiyeen xubnahaas ay durayeen, kuwaas oo ay liiskooda u gudbiyeen xafiiska ra’iisul wasaaraha.
Midowgu waxa uu sheegay inay ku kalsoon yihiin in xafiiska ra’iisul wasaaruhu uu si adag arrintaas u eegi doono wixii ka soo baxana ay qaadan doonaan.
Arrintaas ayaa waxa ay qeyb ka aheyd heshiisii dhawaan laga gaaray arrimaha doorashada ee Soomaaliya.
Rai’isal wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed kana tirsan golaha midowga musharaxiinta, Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa BBC u sheegay in arrimaha ay ka cawdeen ay aheyd in guddiga doorashada ay ka mid ahaayeen shaqalaaha dowladda iyo ciidamada sidaas darteedna ay ku diidanayeen.
Wuxuu sheegay in eedeymaha si wanaagsan loo gorfeeyay isla markaana cabashadooda ay u gudbiyeen xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
“Waxaan uga cabaneynaa, guddiga doorashada waa inay dhexdhexaad ka noqota dadka la dooranayo, waa inay dhexdhexaadin karaan, waa inay garsoor u noqon karaan..waxaa kale oo ku jiray dad dowladeeda shaqaalaheeda kamid ah oo aan sax aheyn”
Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa sidoo kale sheegay inay sugi doonaan go’aanka kasoo baxa xafiiska Ra’iisul wasaaraha.
“Anagu waxaan aaminsanahay in la xalliyo oo hannaanka doorashada hore u socota, oo aanan la carqaladeyn, anagu waxaan ku kalsoonahay si dalkan ay uga dhacdo doorasho xor oo xalaal ah in hannaanka doorashada la saxo” ayuu yiri Ridwaan.
BBC-da oo Ridhwaan wax ka weeydiisay in sababta xubnaha ay cabashada uga qabaan ay tahay in ay xidid la yihiin madaxda qaar iyo in aragtidooda ay baraha bulshada ka taagaareen dowladda, ayuu iska fogeeyay arrintaas. Wuxuuna ku adkaystay in sababta ugu weyn ay tahay in ay ka tirsanyihiin ciidanka nabad sugidda iyo shaqaalaha rayidka dowladda.
Previous Faahfaahin ka soo baxaysa qarax ka dhacay Muqdisho